Warar kala duwan oo ka soo baxaya duqeyn ka dhacday Saakow – STAR FM SOMALIA
Warar kala duwan oo ka soo baxaya duqeyn ka dhacday Saakow
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya duqeyn khamiistii la soo dhaafay ka dhacday duleedka degmada Saakow ee Gobolka Jubadda Dhexe, iyadoo la sheegay in howl gal qorsheysan ay iska kaashadeen Ciidamo Soomaali iyo Mareykan ah.
Wararkeenii Khamiistii la soo dhaafay aan ka qornay duqeynta ayaa ah kuwo isa soo taraya tuhuno kala duwan uu jiro, maadaama duqeynta ay aheyd mid xooggan, iyadoo la sheegayo in xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab lagu bartilmaameedsanay, inkastoo aanay jirin wali warar xaqiiqo ah.
Isgaarsiinta deegaanada qaar ee Jubbooyinka ayaa hawada ka maqneyd khamiistii iyo jimcihii, kadib markii ay dyqeynta dhacday.
Saraakiil ka tirsan dowladda oo aan magacooda sheegin ayaa warbaahinta u sheegay inay u badan tahay in duqeyntaas lagu dilay xubno sare, balse ma sheegin magacooda.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa Khamiistii sheegtay in duqeyn lagu bartilmaameedsaday guri ku yaal duleedka Saakow oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Gobolka Jubadda Dhexe ayaa ayaa ah gobolka kaliya ee degmooyinkiisa si buuxda gacanta ugu hayaan Al-Shabaab, iyadoo la sheego inay tahay meelaha ay ku badan yihiin Saraakiisha Al-Shabaab.
Dhinaca kale labadii habeen ee la soo dhaafay waxaa diyaarado milateri oo aan caadi aheyn ka dagayeen, garoonka diyaaradaha Muqdisho, waxaana ugu dambeysay xalay oo dadka degan agagaarka garoonka diyaaradaha ay ka seexan waayeen guuxa diyaarado saqdii dhexe soo degayay, isla markaana saacado kadibna ka duulayay.
Ma cada in diyaaradaha Milateri ee ka degayay habeenadan inay xiriir la leeyihiin duqeyntii dhacday khamiistii la soo dhaafay oo aanay jirin wali wax war ah oo ka soo baxay.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya oo sheegaya duqeyntan dhacday khamiistii, iyadoo horay Mareykanka u sheegtay duqeymo uu ka fuliyay Soomaaliya, kaasoo uu ku dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Askari ka tirsan ciidamada Nabad Suggida oo Darawal Mooto Bajaaj ku dilay Muqdisho